वान डे सिरिजः अफ्रिका र श्रीलंका भिड्दै, को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
वान डे सिरिजः अफ्रिका र श्रीलंका भिड्दै, को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, फागुन १९ । साउथ अफ्रिकाले श्रीलंका विरद्धको एकदिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा टस जितेर बलिङ रोजेको छ । खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो १ः४५ बजेदेखि शुरु भएको हो ।
पाँच खेलको यो सिरिज अफ्रिकामा भइरहको छ । श्रीलंकाको कप्तानी लासिथ मलिंगाले गरेका छन् । भने, अफ्रिकाको नेतृत्व फाफ डुप्लेसिसले गरिहरेका छन् । पहिलो खेलमा दुवै टिमको अन्तिम ११ मा कोकोले स्थान बनाउन सफल भए? हेर्नुस्–
ट्याग्स: Cricket, Sri Lanka Vs South Africa